Uncategorized Archives - MyCom
Ph : 02-69-309, 02-399-84
Call Us! 02-69-309, 02-399-84
MyCom Computer မှAcer ချစ်ပရိသတ်များအတွက်“ Hello “ ဆိုတဲ့ Promotion နှင့်မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ “ Hello ” ဆိုတဲ့ Promotion လေးဆိုတာက?? ဒီဇိုင်းဆန်းပြီး စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်တဲ့ Acer Notebook တွေထဲကသတ်မှတ်ထားတဲ့ မော်ဒယ်ကိုဝယ်ယူပြီး မော်ဒယ်အလိုက် Special Cash back တွေပြန်လည်ရရှိမှာပါ။ ပြီးတော့ ခုလို စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်ပြီး ဒီဇိုင်းဆန်းလှပတဲ့ Acer Notebook လေးတွေကို မော်ဒယ်အလိုက် Warranty 1 Year ကနေ2Years ပေးထားတဲ့အတွက် စိတ်ချယုံကြည်စွာဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
MSI Gaming Notebook GE62 7RE
MSI Gaming Notebook များထဲတွင် ပြန်အမ်းငွေအမြင့်ဆုံး ၁၅၀၀၀၀ ကျပ်ရရှိမည့် တစ်မူထူးခြားကောင်းမွန်သည့် Gaming Notebook, Game ကစားနေစဉ် သင်နှင့်အတူ စီးမျောလိုက်ပါစေမည့် RGB Full Color Backlit Steelseries Keyboard၊ မြင်သူတကာငေးမောစေမည့် အမြင့်မားဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်များပေးစွမ်းနိုင်သည့် MSI Gaming Notebook GE62 7RE ကို Price: USD 1300ယMSI Cashback Promotion 100,000 Kyats,MyCom Cashback Promotion 50,000 Kyats Free Gifts; Gaming Headset, Gaming Mouse, Gaming Backpack, Power Bank တို့အပါအ၀င် လက်ဆောင် (၇)မျိုး တို့ဖြင့် ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ လာရောက်လေ့လာကြည့်ရှုဖို့…
Intel KabyLake7Gen Core i7 7700HQ@2.8GHz
MSI Gaming Notebook များထဲတွင် Cashback အမြင့်ဆုံး ၁၂၀၀၀၀ ကျပ်ထိ သက်သာစေမည့် တစ်မူထူးခြားကောင်းမွန်သည့် Gaming Notebook, Game ကစားနေစဉ် သင်နှင့်အတူ စီးမျောလိုက်ပါစေမည့် RGB Full Color Backlit SteelSeries Keyboard၊ မြင်သူတကာငေးမောစေမည့် အမြင့်မားဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်များပေးစွမ်းနိုင်သည့် MSI Gaming Notebook GE62 7RE ကို Price: USD 1300. Cashback Promotion 120,000 Kyats Free Gifts; Gaming Headset, Gaming Mouse, Gaming Backpack, Power Bank တို့အပါအ၀င် လက်ဆောင် (၇)မျိုး တို့ဖြင့် ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ စိတ်ဝင်စာသူများအနေဖြင့် တယ်လီဖုန်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ Chat…
MyCom Computer မှ MSI Gaming Notebook Promotion နှင့်မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ 1.Gaming Notebook တွင် အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်များ၊ ခံစားမှုများ ရရှိနိုင်မည့် MSI Gaming Notebook GL62M 7RDX Specifications Intel KabyLake7Gen Core i7 7700HQ@2.8GHz nVidia GeForce GTX 1050 4GB DDR5 8GB DDR4 2400MHz (Up to 32GB) 1TB SATA HDD 7200RPM 15.6″ Full HD LED Display (1920×1080) Anti Glare DVD Super Multi Steelseries…
2.0GHz dual-core Intel Core i5 processor Turbo Boost up to 3.1GHz 8GB 1866MHz memory 256GB PCIe-based SSD1 Intel Iris Graphics 540 Two Thunderbolt3ports
7th Generation Intel® Core™ i3-7100U Processor Windows 10 Home 64-bit English 4GB LPDDR3 1866MHz 128GB Solid State Drive
Windows 10 Home 2.80 GHz Intel® Core™ i7 processor 15.6″ 1920 x 1080 GeForce® GTX 1050 Ti NVIDIA® 16 GB Memory 256 GB Solid State Drive Capacity
© 2017 | Copyright by MyCom Computer